I-Clamp Factory, abahlinzeki - China Clamps Manufacturers
Intambo Pipe Hook
Njengenye yeziphanyeko zokuncintisana kakhulu zenkampani, izingwegwe zethu zamapayipi wocingo zithole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi ls camera i-vinyl iyatholakala.
I-UPC evunyelwe i-ABS Corrosion Proof J-hook
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, ama-J-hook ethu avunyelwe yi-UPC. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, ukuklanywa kwezimbambo ezimbili kwenza ukuqiniswa kwezipikili ngesikhathi sokuhamba ngokwakhiwa.
Umsebenzi Okhanyayo U-Strap
Njengomunye wabalengisi benkampani abancintisana kakhulu, izibani zethu zomsebenzi ezikhanyayo zithole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, zingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho, ngokwesibonelo, zingakhiwa ngenjoloba, ukufaka noma isihlangu. Futhi kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
Njengoba omunye iziphanyeko ukuncintisana kakhulu yenkampani, izinzipho zethu izingwegwe zenzelwe 1/2 ″ x 3/4 ″ CTS amapayipi. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika.
Sakaza i-Iron Pipe Clamp Ngocingo olusheshayo nge-Surface Lashukumisa
Njengoba omunye iziphanyeko ukuncintisana kakhulu inkampani, cast yethu ipayipi ngocingo ngocingo okusheshayo nge ebusweni lashukumisa bathole omkhulu ukuthandwa emhlabeni wonke, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
Isibani Esikhanyayo se-U-Strap (iTubing Tubing)
ithole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, zingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho, ngokwesibonelo, zingakhiwa ngenjoloba, ukufaka noma isihlangu. Futhi kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: i-Zinc ifakiwe, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
Kokuzihlanganisa Cast Iron Pipe Ngocingo yethusi kuhlinzwa
Njengoba omunye iziphanyeko ukuncintisana kakhulu inkampani, zethu kokuzihlanganisa cast iron ipayipi izibopho zenzelwe ukumiswa zethusi tubing. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
Ipayipi elenziwe nge-Copper Hanger Strap
Njengoba omunye iziphanyeko ukuncintisana kakhulu yenkampani, zethusi-kuhlinzwa ipayipi isiphanyeko imichilo yethu ithole okukhulu ukuthandwa emhlabeni wonke, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi zifakwe ithusi ngemigodi eshintshashintshayo engu-1/4 kanye no-3/16 ″ ngokuhlelekile.
UPC Plastic 90 ° Ukumiswa Ngocingo Fastener
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, iziqobosho zethu zokumiswa kwepulasitiki ezingama-90 ° zivunyelwe i-UPC. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, izimbambo zazo zivumela ipayipi ukuba lishelele kalula futhi lithule ngokwengeziwe lapho ipayipi likhula futhi lisebenza ngokuvumelana.